Bato reZanu-PF rinoti rakazvipira kuti hurumende yemubatanidzwa ifambire mberi zvakanaka, kunyange bato reMDC riri kuti Zanu-PF haina kuzvipira.
Mutevedzeri wemunyori wezvekuburitswa kwemashoko muZanu-PF, VaEphraim Masawi, vaudza bepanhau repa internet reZimoline kuti vari kushamisika kuti MDC yave kutara nguva yekuti vapedze kugadzirisa zviri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa, zvikuru pakati pemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai.
Munyori mukuru weMDC, VaTendai Biti, vakaudza vatori venhau neChitatu kuti VaMugabe, VaTsvangirai pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vanofanira kupedza nyaya dzanetsa neMuvhuro.
VaBiti vakati izvi zvikasaitwa, bato ravo richatora matanho. Nyaya dziri kunetsa inyaya dzekugovana magavhuna, vanyori vemapazi ehurumende, kudomwa kwagavhuna weRBZ nemuchuchusi mukuru wehurumende naVaMugabe vari voga, izvo zviri kunze kwechibvumirano chavakanyorerana.
Imwe nyaya yanetsa ndeya VaMugabe yekuramba kutoresa VaRoy Bennet mhiko semutevedzeri wegurukota rezvekurima, pamwe neyevasungwa vezve matongerwo enyika.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vatatu ava vakabvumirana mune zvimwe zvinhu, kunze kwenyaya yagavhuna weRBZ nemuchuchisi mukuru wehurumende.
Zvinonziwo Zanu-PF yakaita musangano neChipiri wekuzeya zvakawiriranwa pakati paVaMugabe naVaTsvangirai, asi hazvisati zvazivikanwa kuti bato iri rakazvitambira here kana kuti kwete.
Nyaya huru inonzi yakazeiwa neZanu-PF ndeyekusiiswa basa kwemamwe magavhuna ari munzvimbo dzakakunda MDC musarudzo dzegore rapera.
Zvinonzi VaMugabe vari kuti magavhuna anenge asiiswa basa, anofanirwa kupihwa mari dzavo dzinowirirana nemakore anobvumirwa munhu nemutemo kuti ashande sagavhuna wedunhu.
Vatungamiri vatatu ava vari kutarisirwa kuzeya nyaya iyi zvekare neMuvhuro. VaCharles Mangongera vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
VaMangongera vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zanu-PF yave kutya kuti MDC ingangobude muhurumende yemubatanidzwa.